Booliska Iswiidhan oo dar dar gelinaya la dagaalanka kooxaha argagaxisadda | Somaliska
Awood ay boolisku u yeeshaan ka hortaga kooxaha argagaxisadda ah waa in laga sii kor dhiyaa, sidaasi waxaa fikirkooda ku sheegay madaxddaa booliska qaranka ee Dan Eliasson iyo Mats Löfving oo maqaal ku qoray jariidada Dagens Nyheter (DN) .
Haatan dowladda waxaa ay la dagaalanka kooxaha aragaxisadda ah ku qarash gareeyneysa adduun gaaraya 400 oo malyan oo lacagta karoonka ah. Dhinacyadda la doonayo in la dar -dar geliyo, ka hortaga hubka, agabka loogaga hortagayo, fulinta howsha ee bookiska, xoojinta kooxaha sida gaarka ah u tababaran, shaqaleeynta ciidanka diyaarka u ah howshan, tababaro iyo casharo la xirriira sida loo wajahi lahaa haddii u dhaco fal argagaxiso iwm.
Dhinaca kale labadda mas’uul waxaa ay qoreen liis dheer oo ay kaga waramayaan xalka deg dega ah uu awood siinta booliska iyo xaaladaha wax ka qabashada u baahan. Waxeey maqaalkooda ku baaqeen in la hagaajiyo tusaale ahaan kaamirooyinka, in shirkadaha taleefanadda laga soo qaato macluumaadka iyo si qarsoodi ah loo dhageeysto taleeefanadda. Ugu dambeyntii waxaa kale oo ay hoosta ka xariiqeen in dib u hagaajin lugu sameeyo habka loo daba kacayo kooxaha argagaxisadda ah iyo ka hortaga xag jiryeynta.
Inkastoo Iswiidhan aanu aheyn dal si toos ah loo bar tilmaameedsado, hadana waxaa horey u dhacay falal u eg falal aragaxiso. Marka loo fiiriyo dalalka kale ee Ingriiska, Jarmalka, Faransiiska iyo Biljim oo kooxaha argagaxisadaha ahi dhibaato u geeystaan.